AK 47 XTRM Mbeu dzechikadzi | MyWeedSeeds.com
AK 47 XTRM Feminized mbeu dzembanje ndiyo nyika nyowani yekupedzisira inobereka. Iyi XTRM strain ine zvese hunhu hwakagara nhaka kubva kumadzisekuru ake akajairwa AK 47, asi iye akayambuka neyedu ane mukurumbira. Chirikadzi Chirungu XTRM. Kugadzira kushushikana uku kwakakodzera kune chero munhu anoda kurima mbanje, kunyangwe asina kana ruzivo muvashandi vevarimi, mbeu dzakaitwa vakadzi. Yakanyatsogadzikana, uku ndiko kunetseka kwepambanje pakati pevachangobva kuyambuka muvhu wembanje. Nokunhuwirira kwake kunotyisa, uye kugona kukura, macristal akaumbika akapetwa katatu zvakapetwa, ichi "ndicho" chinetso chembanje kusarudza!. Iyo AK 3 XTRM Yakafemerwa isarudzo yakanaka seyekurapa kunetsekana nekuda kwenzvimbo yepamusoro yechiratidzo che47%.